Electric Power neZilinganisi
Shanghai Shenyong Ijongene ukuyila, imveliso kunye nokuthengiswa of line ojolise zombane isikrweqe eligaqa. Kwakhona inika uthotho ngeenkonzo kubathengi bethu ezifana ufakelo, ngokutsha, nokulungiswa bakuwufunqula izixhobo ngoomatshini kunye ngokutsha & nokulungiswa kwezixhobo zombane ulawulo, imveliso kunye neentengiso kwezakhiwo, Consulting ishishini, cone esigingqini, ukusetyenzwa lwezincedisi erhuqwayo. Le nkampani kukuba ojolise kokubini apha ekhaya nakumazwe aphesheya kwaye banikwe i-Class Umbutho yequmrhu emarikeni. Igxininisa kwimveliso isikrweqe uqinisa hank kwangaphambili-knotting iimveliso elula inoveli zombane kunye zonxibelelwano umgca esekelwe series. Iimveliso zethu isetyenziswe ngokubanzi xa besebenzisa iifoni, womnatha amandla, ugesi.
Railway, kunye nefayibha-optic cable. iimveliso zethu umgangatho wokukhanya, nzima-machining, ngokulula ifakiwe kwaye ugcino lwamandla evumela ukongama ngayo nabanye uhlobo okubamba zombane kunye zonxibelelwano weentonga azilingani.
Le nkampani ibonelelwe karhulumente-of-the-ubugcisa izixhobo zokugqwesa iitalente zobugcisa, ukusukela ingxelo mission le "umgangatho kuqala, ukunyaniseka elongamileyo" kwaye ikhuthaza nomoya lweshishini le "ubunye & ebambekayo, ukwanda & ukuzinikela". Athwala nge ISO 9001: 2008 Standard sisazela yaye yenza Izinga lokuthobela kanye-khangela-based ukuya kwi-98% yaye izinga ulwaneliseko abathengi 'ukuya ku-100% ngokusebenzisa awokuvelisa ngocoselelo izinto, ulawulo lwezenzululwazi, inkonzo enyanisekileyo nolwaneliseko oluqinisekileyo. iimveliso zethu ukuhlangabezana neemfuno nokwakhiwa kunye nolwakhiwo womnatha yombane. Ngelo xesha, inkampani iza kuphucula umgangatho weemveliso neenkonzo rhoqo ukwanelisa iimfuno zilandelayo izenzo zamazwe ngamazwe, unika iinkonzo ezingcono kukunikela Omni kubathengi bethu.
Idilesi: No. 85 ShenXu Road, District Songjiang, Shanghai, China